Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Sweden oo ka qaybgalay dood looga hadlayay arima quseeya dalkaa
OYSU Sweden oo ka qaybgalay dood looga hadlayay arima quseeya dalkaa
Waxaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 28/1-2012 uu kulan aad loo soo agaasimay dhexmaray OYSU Swden, ururada dhalinyarada ee ka jira Stockholm xaafada Järfa, waalidiinta, Odayasha, wax garadka & Suxufiyiinta qaybaha saxaafada ee bulshada.
Kulankan oo ka dhacay xaafada Husbi ee magaalada Stockholm ayaa waxaa looga hadlay ama lagu falanqeeyay arima aad u fara badan kuwaasoo looga arinsanayay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka bulshada ku wajahan haday noqato Dhinaca deegaanka, Caafimaadka, Xuuquda qofka bini’admiga ah uu leeyahay & maamul xumida ka jirta dawlada hoose ee xaafadaa.
Dawlada hoose ee xaafada Järfa ayaa bilowday olole cusub oo ka hor imanaya shacabka ku dhaqan xaafadahaas, Ololahaas oo ay dowlada doonayso inay Iskuulada, Xarumaha caafimaadka, Guriga umada ee ay bulshada isugu timaado & goobaha dabaasha ee hada ay dawladu maamusho free-na u ah umada inay ku wareejiyaan shaqsiyaad lagana dhigo lacag.
Waxaa kaloo jirta in Bank-yada ku yaalay xaafadaas intooda badan laga raray oo bulshada ku dhaqan ay meela fogfog u aadan kolka ay u baahdaan Bank.
Sikastaba ha ahaatee dood farabadan & afkaaro la is weydaarsaday ka dib ayuu Mudane goobta ka hadlay yidhi waa muhiim in qofku uu fahmo waxa uu shaqsiyan xaquuq uu u leeyahay mana jirto cid kugu qasbi kartaa wax aysan naftaadu raali ka ahayn, Dimuqraadiyaduna waa aas-aaska bulshada hor markeeda ah,
Waxaana loobaahan yahay ayuu yidhi inay dhalinyaradu ay noqdaan kuwo iyagu fahansan siyaasada si ay ummada uga difaacaan go’aamada qaldan ee ay qaataan maamulka talada haya.
Kadib waxaa hadalka qaatay Mudane Amin Barkhadle oo ah Xog-Hayaha OYSU Sweden oo ku baraarujiyay bulshadii madasha isugu timid in ay muhiim tahay kulamada noocan oo kala ah, haboontahayna inay dhalinyaradu ay hormuud u noqdaan hormarka ummada, kana hortagaan cambaareeyaana dhibaatooyinka bini’aadanimo ee meel waliba oo caalamka kamida ka jirta balse aysan ku koobnaan oo kaliya degaanka markaas ay ku sugan yihiin maadama ay dhalinyaradu tahay kuwa kaliya ee bulshada hormariya.
Isku soo wada duuboo kulankii ayaa kusoo gabagaboobay jawi farxadeed la isuna balan qaaday wada shaqayn wacaniyo sidii looga wada hortagi lahaa wax walboo lid ku ah xuquuqda bini’aadanimo.